Abanye abasebenzisi banesithakazelo ukuthi ungabuyekeza kanjani i- "Explorer" kwikhompyutha yakho. Lo mbuzo uthakazelisayo, akunjalo, akuwona wonke umuntu osebenza ne-intanethi. Phela, isiphequluli esikhethiwe asithandwa kakhulu. Noma kunjalo, sizozama ukuqonda izindlela zokuyibuyekeza. Ngezinye izikhathi insizakalo enjalo iyadingeka. Futhi ngisho nekhompyutha. Ake sibone ukuthi singabuyekeza kanjani i-Explorer.
Okokuqala ukusebenzisa amathuluzi evamile wesiphequluli. Inqubo evamile esiza abasebenzisi abasha.
Yini edingekayo? Vula "i-Explorer", bese "kwi-Barbar" khetha "Amathuluzi". Uhlu olukhulu lwezinyathelo ezingenzeka zivuleka. Ukuze ubuyekeze i- "Explorer", kuzodingeka uchofoze ku-Windows Update. Chofoza ku-Custom bese ulinda isikhashana. Kuyoba khona ukulanda ngokuhlola izibuyekezo ezitholakalayo. Kuhlu oluvela, khetha i-Explorer ngenguqulo yakamuva. Uma nje uchofoza kulebuli, ifayela lokufaka lizolandwa. Imizuzu embalwa yokulinda - futhi isenzo siphelile. Ungajabula. Manje kusele kuphela ukuqala kabusha isiphequluli, uma lokhu kungenzeki ngokuzenzakalelayo. Akukho okuyinkimbinkimbi, akunjalo?
Kodwa kukhona inguqulo elula yokuthuthukiswa kwemicimbi. Ngokuvamile kufanele kulabo abangafuni ngokukhethekile ukuqonda indlela yokubuyekeza "i-Explorer." Inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza izonikezwa ngokuzenzekelayo uma ufaka isiphequluli. Lokhu kusho ukuthi njalo uma uqala i-Explorer, ikhompiyutha izokusiza ukuba uvuselelwe.
Inkinobho yokuvuselela okuzenzakalelayo ivela kule festile. Chofoza kuso bese ulinda isikhashana. Vumelana nesivumelwano selayisense bese uqinisekisa ukufakwa. Imizuzu embalwa - futhi inqubo izophela.
Eqinisweni, akuyona indlela engcono yokubuyekeza. Abasebenzisi abaningi bayaqaphela ukuthi banokuhluleka nokuhluleka kusiphequluli ngemuva kwalokhu kutholakele. Futhi hhayi ngaphansi kwanoma yikuphi ukulungiswa. Ngakho-ke, kunengqondo ukucabangela ukuthi ungazama kanjani ukubuyekeza i-Explorer. Futhi ngesikhathi esifanayo musa ukulimaza uhlelo lokusebenza kanye nekhompyutha ngokujwayelekile.
Ngezandla zakho siqu
Isibonelo, kunokunye okunjengokuzivuselela okuzimele. Uzodinga ukuthola ifayela lokufakela i-Explorer ku-intanethi, ulilayishe kukhompyutha bese wenza ukufakwa. Inzuzo yale ndlela yukungabikho kokuhluleka okuningi. Ngaphezu kwalokho, uhlale ukwazi kule simo ukukhetha inguqulo etholakalayo yesicelo.
Landa ifayela lokufaka bese uligijima. Kungcono ukususa inguqulo endala yesiphequluli. Kodwa hhayi ngempela. Manje nje faka isicelo. Inqubo ingathatha noma yikuphi kusuka emizuzwini engu-5 kuya kwehora elingu-1. Yizo zonke izinkinga ezixazululwa. Manje uyazibuyekeza kanjani "i-Explorer" kuya kunguqulo efanele ngaphandle kokulimaza kwikhompyutha. Ngokuvamile, abasebenzisi bakhetha ukusebenzisa indlela yokugcina. Kubangela ukuzethemba okukhulu.
Njengoba ubona, akukho lutho olunzima noma okungavamile kule nqubo. Khetha indlela evumelana nawe, futhi uyisebenzise. Into esemqoka - ungesabi. Ungakwazi ukubuyisela njalo isiphequluli uma kunamaphutha amaningi aphuma emva kokubuyekeza.
INDLELA YOKWENZA KANJANI: Kanjani U-Russianfy Windows 7